အကာအကွယ်အ ၀ တ်အထည်ပေးသွင်းသူများနှင့်စက်ရုံ - China Protective အဝတ်အထည်ထုတ်လုပ်သူများ
Barrier Performance စမ်းသပ်မှုနည်းလမ်း၊ နမူနာအနေအထားနှင့်အကာအကွယ်အ ၀ တ်အထည်များ၏အတားအဆီးစွမ်းဆောင်ရည်အမျိုးအစားများကိုဇယား ၁ တွင်ပြထားသည်။ သီးခြားဝတ်စုံ၏အဓိကနေရာများအတွက်အောက်ပါဇယားတွင်ကြည့်ပါ။ အရည်အတားအဆီးဆိုသည်မှာဆေးဘက်ဆိုင်ရာအကာအကွယ်ပေးသည့်အဝတ်အစားသည်လူနာ၏သွေး၊ ခန္ဓာကိုယ်အရည်များနှင့်အခြားရောဂါများမှကူးစက်သောဗိုင်းရပ်စ်ပိုးများကိုရှောင်ရှားရန်အတွက်ရေ၊ သွေး၊ အရက်နှင့်အခြားအရည်များ၊ hydrophobicity အဆင့် ၄ ခုထက်ပိုသောရေ၊ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာဝန်ထမ်း။ ...
အကာအကွယ်အ ၀ တ်အထည်အသေးစိတ်အချက်အလက်များအမျိုးအစား: တစ်ခါတည်းအ ၀ တ်အထည်မူရင်းနေရာ - ဖူဂျန်၊ တရုတ်အရွယ်အစား - XS / S / M / L / XL / 2XL ကုန်ပစ္စည်းအမည်: အကာအကွယ်အဝတ်အထည်အသုံးချခြင်းပိုးသတ်ဆေး၊ အထီးကျန်ခြင်း၊ ဖုန်မှုန့်နှင့်လေဝင်လေထွက်ပေါက်ခြင်း၊ ပြင်ပအလုပ်များ၊ ကြိုတင်ကာကွယ်ရေး၊ ကျောင်းပိုးသန့်ဆေးစသည်တို့အကောင်းဆုံးမွေးမြူရေးခြံများ၊ ကြက်ခြံများ၊ ကပ်ရောဂါကာကွယ်ရေးလုပ်ငန်းများနှင့်ပြင်ပအလုပ်များအတွက်အကောင်းဆုံးအကာအကွယ်ဝတ်စုံကိုအသုံးပြုသည်။ နေရာများအမျိုးအစား & အသုံးပြုခြင်း ၁) ပိုးကင်းသည့်အမျိုးအစား ...
အကာအကွယ်အ ၀ တ်အထည်အသေးစိတ်အချက်အလက်များအမျိုးအစား: တစ်ခါတည်းအ ၀ တ်အထည်မူလအစ - FuJian, တရုတ်အရွယ်အစား - XS / S / M / L / XL / 2XL ကုန်ပစ္စည်းအမည်: အကာအကွယ်အဝတ်အစားထောက်ပံ့နိုင်မှုစွမ်းရည် - ၃၀၀၀ Piece / Pieces per day ကာကွယ်ရေး ၀ တ်စုံအင်္ဂါရပ်များ ၁ ။ အကာအကွယ်ဝတ်စုံကိုအရည်အသွေးမြင့်မားသောပေါင်းစပ်ပစ္စည်းများဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည်။ ၎င်းသည်ဗိုင်းရပ်စ်နှိမ်နင်းရေး၊ အသက်ရှူနိုင်သော၊ osmosis ကာကွယ်ခြင်း၊ ရေစိုခံခြင်းနှင့်ငြိမ်သက်ခြင်းမရှိသည့်လုပ်ဆောင်ချက်ရှိသည်။ 2. တစ်ခါသုံးလက်တွေ့အကာအကွယ်ဝတ်စုံသည် ...
တစ်နေ့လျှင် 3000 Piece / Pieces စွမ်းရည်ပံ့ပိုးမှုစွမ်းရည် - အကာအကွယ်အဝတ်အထည်အင်္ဂါရပ်များ ၁။ ဖယ်ရှားနိုင်သောလက်တွေ့အကာအကွယ်ဝတ်စုံသည်အရည်အသွေးမြင့်မားသောပေါင်းစပ်ပစ္စည်းများဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည်။ ၎င်းသည်ဗိုင်းရပ်စ်နှိမ်နင်းရေး၊ အသက်ရှူနိုင်သော၊ osmosis ကာကွယ်ခြင်း၊ ရေစိုခံခြင်းနှင့်ငြိမ်သက်ခြင်းမရှိသည့်လုပ်ဆောင်ချက်ရှိသည်။ 2. တစ်ခါသုံးလက်တွေ့အကာအကွယ်ဝတ်စုံသည်၎င်း၏ရေစိုခံနိုင်မှုနှင့်သက်တောင့်သက်သာရှိနိုင်သောရုပ်အင်္ဂါလက္ခဏာများအတွက် ၀ တ်ဆင်ရန်အဆင်ပြေပါသည်။ ၃။ အပူအအေးခံနိုင်သောလက်တွေ့ရာဘာသည်အမြင့်ဆုံးကာကွယ်မှုအဆင့်ကိုပေးသည်။ ၄ ။
ခဲအချိန်: အရေအတွက် (အပိုင်းပိုင်း) 1 - 10000> 10000 Est ။ အချိန် (နေ့များ)7ညှိနှိုင်းရန်အကာအကွယ်အဝတ်အထည်များအင်္ဂါရပ်များ ၁။ တစ်ခါသုံးဆေးဘက်ဆိုင်ရာအကာအကွယ်ဝတ်စုံသည်အရည်အသွေးမြင့်မားသောပစ္စည်းများဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည်။ ၎င်းသည်ဗိုင်းရပ်စ်နှိမ်နင်းရေး၊ အသက်ရှူနိုင်သော၊ osmosis ကာကွယ်ခြင်း၊ ရေစိုခံခြင်းနှင့်ငြိမ်သက်ခြင်းမရှိသည့်လုပ်ဆောင်ချက်ရှိသည်။ 2. တစ်ခါသုံးလက်တွေ့အကာအကွယ်ဝတ်စုံသည်၎င်း၏ရေစိုခံနိုင်မှုနှင့်သက်တောင့်သက်သာရှိနိုင်သောရုပ်အင်္ဂါလက္ခဏာများအတွက် ၀ တ်ဆင်ရန်အဆင်ပြေပါသည်။ ၃ ။
အကာအကွယ်ပေးသည့်အဝတ်အစား၏အင်္ဂါရပ်များ ၁။ ချုပ်ထားသောချုပ်ရိုးများသည်အရည်ခံနိုင်စွမ်းကိုထိန်းထားနိုင်သည်။ ၂။ elastic border နှင့်အတူပါးပျဉ်း။ ၃ ချည်ထိုးထားသော cuffs များသို့မဟုတ် elastic cuffs များသည်ရွေးချယ်နိုင်ကြသည်။ ၄။ elasticated band နှင့် ankles 5. အသုံးပြုစဉ်အတွင်းဝတ်ဆင်နိုင်မှုနှင့်သက်တောင့်သက်သာရှိမှုကျယ်ပြန့်သော armhole ၆။ အမှုန်မရှိပါ။ ဖြန့်ချိမှု ၇။ Ergonomic ၃ ခုရှိသည်ပါးပျဉ်း ၈။ အကောင်းဆုံးသောအံဝင်ခွင်ကျဖြစ်စေရန်အတွက်ခါးပတ်ကျစ်လစ်ခြင်း ၉။ အလွယ်တကူနေရာချထားရန်နေရာသန့်ရှင်းရေး၊ အထွေထွေအထီးကျန်မှု၊ ဖုန်မှုန့်နှင့်လေဝင်လေထွက်၊ ပြင်ပအလုပ်များ၊
အကာအကွယ်အ ၀ တ်အထည်များအင်္ဂါရပ်များ ၁ ။ ၎င်းသည်ဗိုင်းရပ်စ်နှိမ်နင်းရေး၊ အသက်ရှူနိုင်သော၊ osmosis ကာကွယ်ခြင်း၊ ရေစိုခံခြင်းနှင့်ငြိမ်သက်ခြင်းမရှိသည့်လုပ်ဆောင်ချက်ရှိသည်။ 2. တစ်ခါသုံးလက်တွေ့အကာအကွယ်ဝတ်စုံသည်၎င်း၏ရေစိုခံနိုင်မှုနှင့်သက်တောင့်သက်သာရှိနိုင်သောရုပ်အင်္ဂါလက္ခဏာများအတွက် ၀ တ်ဆင်ရန်အဆင်ပြေပါသည်။ ၃။ အပူအအေးခံနိုင်သောလက်တွေ့ရာဘာသည်အမြင့်ဆုံးကာကွယ်မှုအဆင့်ကိုပေးသည်။ ၄။ သက်တမ်းရှည်။ စွန့်ပစ်ရန်လွယ်ကူပြီးပတ် ၀ န်းကျင်ကိုထိခိုက်စေသည်။ & nbs ...
အကာအကွယ်အဝတ်အစားအသေးစိတ်အမျိုးအစား: တစ်ခါတည်းအ ၀ တ်အထည်မူရင်းနေရာ - FuJian, တရုတ်အရွယ်အစား: XS / S / M / L / XL / 2XL ကုန်ပစ္စည်းအမည်: အကာအကွယ်အ ၀ တ်အထည်ထောက်ပံ့နိုင်မှုစွမ်းရည် - ၃၀၀၀ Piece / Pieces per day လျှောက်လွှာမွေးမြူရေးပိုးသတ်ဆေးအတွက်အသုံးပြုသည် အထီးကျန်ခြင်း၊ ဖုန်နှင့်လေဝင်လေထွက်၊ ပြင်ပအလုပ်များ၊ ရပ်ရွာကူးစက်ရောဂါကာကွယ်ခြင်း၊ ကျောင်းမှပိုးသန့်ဆေးများစသည်တို့အကောင်းဆုံးမွေးမြူရေးခြံများ၊ ကြက်မွေးမြူရေးခြံများ၊
အကာအကွယ်အဝတ်အစားကိုဘယ်လိုကောင်းကောင်းသုံးရမလဲ။ အကာအကွယ်အဝတ်အစားများအသုံးပြုခြင်းသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ဘဝနှင့်ကျန်းမာရေးတို့နှင့်နီးကပ်စွာဆက်နွယ်မှုရှိသဖြင့်အရည်အသွေးလိုအပ်ချက်များနှင့်ကိုက်ညီသောအကာအကွယ်အဝတ်အစားကိုရွေးချယ်ရန်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သည်။ လက်ရှိတွင်လူသိများသောအဓိကကုန်အမှတ်တံဆိပ်များမှာ Dupont United States၊ United States Lakeland, 3M, Sperian စသည်ဖြင့်ဖြစ်သည်။ အကာအကွယ်အဝတ်အစားများရရှိပြီးနောက်မှန်ကန်သောအသုံးပြုမှုသည် ပို၍ အရေးကြီးသည်။ Design Requirement Appearance အကာအကွယ်ပေးသည့်အဝတ်များသည်ခြောက်သွေ့။ သန့်ရှင်းပြီးနူးညံ့သိမ်မွေ့ရမည်။
အကာအကွယ်အ ၀ တ်အထည်များအင်္ဂါရပ်များ ၁ ။ ၎င်းသည်ဗိုင်းရပ်စ်နှိမ်နင်းရေး၊ အသက်ရှူနိုင်သော၊ osmosis ကာကွယ်ခြင်း၊ ရေစိုခံခြင်းနှင့်ငြိမ်သက်ခြင်းမရှိသည့်လုပ်ဆောင်ချက်ရှိသည်။ 2. တစ်ခါသုံးလက်တွေ့အကာအကွယ်ဝတ်စုံသည်၎င်း၏ရေစိုခံနိုင်မှုနှင့်သက်တောင့်သက်သာရှိနိုင်သောရုပ်အင်္ဂါလက္ခဏာများအတွက် ၀ တ်ဆင်ရန်အဆင်ပြေပါသည်။ ၃။ အပူအအေးခံနိုင်သောလက်တွေ့ရာဘာသည်အမြင့်ဆုံးကာကွယ်မှုအဆင့်ကိုပေးသည်။ ၄။ သက်တမ်းရှည်။ စွန့်ပစ်ရန်လွယ်ကူပြီးပတ် ၀ န်းကျင်ကိုထိခိုက်စေသည်။ အက်ပလီကေးရှင်း ...